Rajada laga muujiyay Shirka Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Rajada laga muujiyay Shirka Muqdisho
Rooble ayaa la filayaa inuu sameeyo tanaasul si xal looga gaaro khilaafka taagan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa rajo fiican ka muujiyay inuu guul kusoo dhamaado shirka Muqdisho, ee khilaafka arrimaha doorashadda looga hadlayo.
"Shirka maanta ayaa muhiim u ah geeddi-socodka doorashooyinka iyo kala-guur siyaasadeed. Waxaan ku rajo weynahay in RW Rooble iyo hoggaamiyeyaasha Maamullada inay muujiyaan biseyl siyaasadeed oo lagama maarmaanka u ah in heshiis laga gaaro dhammaan arrimaha taagan iyo dhinaca fulinta," ayuu yiri Cumar C/rashiid.
Wuxuu sheegay in Shirkan uu yahay fursad muhiim u ah mustaqbalka Soomaaliya, isagoona ugu baaqey dhamaan dhicayada inay isku tanaasulaan, islamarkaana heshiis loo dhan yahay kasoo saaraan wadahadallada.
Dowladda Soomaaliya ayaa waqtiga ka dhamaadey horaantii sanadkan, iyadoo aan la qaban wax doorasho ah kadib markii Farmaajo afartiisa sano ee lasoo dhaafay uusan diyaarin hanaan doorasho, isagoo waqtiga ku lumiyay burburinta nidaamka Federaalka iyo colaadinta dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya.
Halkii doorasho laga filayay, wuxuu sameeyay Farmaajo mudo-korarsiga sharci darro ah, oo dalka geliyay xaalad khatar ah, iyadoo dagaal uu ka qarxay Muqdisho kaasoo hadii uusan jiri lahayn dedaalka Rooble isku bedelo lahaa colaad sokeeye.